1000 USD သို့ NZD ᐈ ပွောငျး $1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ တွင် နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ
ငွေလဲနှုန်းကို ငွေကြေး ပွောငျး ငွေကြေး နိုင်ငံများကငွေကြေး ခြေရာခံခြင်းသည်ငွေကြေး ပွောငျး
USD သို့ NZD
1000 USD သို့ NZD
သငျသညျပြောင်းလဲပါပြီ 1000 🇺🇸 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ 🇳🇿 နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ. သငျသညျအရှိဆုံးတိကျမှုရလဒ်ပြသနိုင်ဖို့ကျနော်တို့ကနိုင်ငံတကာငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအသုံးပြုပါ. ငွေကြေးပြောင်း 1000 USD သို့ NZD. ဘယ်လောက်လဲ $1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ? — $1403.031 NZD.ယင်းကိုကြည့်ပါ ပြောင်းပြန်သင်တန်း NZD သို့ USD.ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သင်၌စိတ်ဝင်စားဖြစ်နိုင်သည် USD NZD သမိုင်းဆိုင်ရာဇယား, နှင့် USD NZD သမိုင်းဆိုင်ရာမှာ data ငွေလဲနှုန်းကို၏. ကြိုးစားကြဖို့အခမဲ့ခံစားရ ပိုပြီးပြောင်း...
NZD – နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ
ပွောငျး 1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ
မှုနှုန်းခြင်းအားဖြင့်: $1.403 NZD (0.000060)0.00456%
ပြောင်းပြန်: $0.713 USD
မင်းသိလား? တစ်ဦးကလွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်, ထိုနေ့၌, ငွေကြေးနှုန်းကို အမေရိကန် ဒေါ်လာ ရန် နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ ခဲ့: $1.553. ထိုအချိန်မှစ. ငွေလဲနှုန်းရှိပါတယ် အားဖြင့်ယုတ်လျော့ -0.150 NZD (-9.66%).
1050 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ1100 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ1150 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ1200 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ1250 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ2500 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ5000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ10000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ20000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ40000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ1 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ထိုင်းဘတ်1 အီရန်ရီအော်လ် သို့ အာမေးနီးယားဒရမ်း1 တာဂျစ်ကစ္စတန် ဆိုမိုနီ သို့ အီရန်ရီအော်လ်8.5 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ထိုင်းဘတ်820 အာဖဂန်အာဖဂါနီ သို့ အီရန်ရီအော်လ်1 အာဖဂန်အာဖဂါနီ သို့ အီရန်ရီအော်လ်149400 ရုရှ ရူဘယ် သို့ Bitcoin1960 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ Bitcoin1 ရုရှ ရူဘယ် သို့ Bitcoin2.99 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ထိုင်းဘတ်18000 ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို1 ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို1500 ထိုင်ဝမ် ဒေါ်လာအသစ် သို့ အမေရိကန် ဒေါ်လာ3500 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ထိုင်းဘတ်
1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူရို1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဗြိတိသျှ ပေါင်1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဆွစ် ဖရန့်1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နော်ဝေ ခရိုဏာ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဒိန်းမတ် ခရိုဏာ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ချက်ခိုရိုနာ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ပိုလန်ဇလော့တီ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ကနေဒါ ဒေါ်လာ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဩစတြေးလျ ဒေါ်လာ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ မက္ကဆီကို ပီဆို1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဟောင်ကောင် ဒေါ်လာ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဘရာဇီး ရီးယဲ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ အိန္ဒိယ ရူပီး1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ပါကစ္စတန် ရူပီး1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ စင်္ကာပူ ဒေါ်လာ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နယူးဇီလန် ဒေါ်လာ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ထိုင်းဘတ်1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တရုတ် ယွမ်1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ဂျပန်ယန်း1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ တောင်ကိုရီးယား ဝမ်1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ နိုင်ဂျီးရီးယားနိုင်းရာ1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ရုရှ ရူဘယ်1000 အမေရိကန် ဒေါ်လာ သို့ ယူကရိန်း ဟီရီဗင်းညားအမေရိကန် ဒေါ်လာ ပိုပြီးငွေကြေးရန်...
ငွေလဲနှုန်းကိုနောက်ဆုံးရေးသားချိန်: Sun, 16 May 2021 14:55:02 +0000.